Banyere Anyị - Dingzhou Longxiang Hardware Products Co., Ltd.
anyị na-ọkachamara na rụpụta na mbupụ nke waya nsu na waya ngwaahịa ruo ọtụtụ afọ.
Anyị bụ ndị Factory malitere na 2004, Anyị na-ọkachamara na rụpụta na Export nke Waya ngere na waya Products N'ihi na Ọtụtụ Afọ.
Anyị Main Products Bụ: mesikwuru hexagonal Waya Netting, welded Waya ntupu, Chain Link ngere, ngere Panel Ma Post Ma Ngwa, kpaliri Waya wdg Ọ na-ọtụtụ-eji Petroleum, Chemical Industry, Scientific Research, Engineering, Medicine, Aviation, Spaceflight, Highway, Railway, Machinery, Electronics, Textile, Metallurgy, Mining, Farming na ọtụtụ ubi ndị ọzọ.
Anyị Company nwekwara ike Dị ka ndị ahịa chọrọ, ịtụ dị iche iche nkọwa nke ihuenyo Ngwaahịa.
Ruo Ọtụtụ Afọ, Companylọ Ọrụ Na-achụ Ahịrị Azụmaahịa nke "Surlanahụ Site na Ogo, Ọganihu Site Na Ntugharị", Na-emekwa Creatmepụta Ọrụ Ọma Na Ngosipụta Ihuenyo Na Inweta Ntụkwasị Obi Site na Ndị Ọrụ Ọhụrụ na Ndị Ochie. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpọtụrụ ịkpọtụrụ anyị site na ibe weebụ ma ọ bụ ndụmọdụ ekwentị, anyị ga-enwe obi ụtọ ijere gị ozi. .
Maka ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị, ndị ọrụ ga-ebu, wụnye, na-agba ọsọ, jiri ma jigide n'ụzọ zuru oke dịka ntuziaka ọrụ injin yana usoro awara awara. Achọpụtara ọdịda ahụ dị ka nsogbu nke ngwaahịa, ụlọ ọrụ anyị ga-edozi ya maka gị.
Ọdịda na ọnwụ kpatara site na ogo ngwaahịa anyị. Ụlọ ọrụ anyị abụghị ọrụ
Dabere na ngwaahịa nwere oke mma, ọnụahịa asọmpi, na ọrụ anyị zuru oke, anyị enwetawo ike na ahụmịhe ọkachamara, anyị wulitekwa ezigbo aha n'ọhịa. Yana mmepe na-aga n'ihu, anyị na-etinye onwe anyị ọ bụghị naanị na azụmaahịa ụlọ ndị China kamakwa ahịa mba ụwa. Ka ị kpalie site na ngwaahịa anyị dị elu na ọrụ nnabata. Ka anyị meghee isi ọhụụ nke uru elere anya na mmeri abụọ.
Tenkpụrụ anyị bụ "iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, mma kacha mma". Anyị nwere obi ike n'inye gị ọrụ dị mma na ngwaahịa dị mma. Anyị ji obi anyị nile na anyị nwere ike igosi mmeri-mmeri azụmahịa imekọ ihe ọnụ na ị na-eme n'ọdịnihu!